आर्यन-साम्राज्ञिको ‘कायरा’ सुटिङको लागी फिलिपिन्स, नायिका लण्डन : अब के गर्छिन् ? - Purbeli News
आर्यन-साम्राज्ञिको ‘कायरा’ सुटिङको लागी फिलिपिन्स, नायिका लण्डन : अब के गर्छिन् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २६, २०७४ समय: १२:०३:३८
आर्यन युवापुस्ता माझ लोकप्रिय भएपनी उनि अभिनित तथा निर्मित फिल्मले सोचे अनुरुपको व्यापार भने गर्न सकेको छैन् । यसैले उनको फिल्मी करियर र बनेको स्टारडम धरापमा पर्दै गरेको विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । यहि मेसोमा उनले साम्राज्ञिलाई आफ्नो फिल्ममा अभिनय गराउने भनेर खबर बाहिरिए पछि भने ‘करियर सेभ को लागि आर्यनले साम्राज्ञि रोजे’ जस्ता कुराहरु पनि भए ।
आर्यनको पनि लगानी रहेको ‘नोभेम्वर रेन’ र ‘क्लासिक’ असफल फिल्मको सुचिमै पर्छ । यो फिल्महरुले पनि सोचे अनुरुपको व्यापार गर्न सकेको थिएन । अन्ततः उनले साम्राज्ञिलाई लिएर निर्माण गर्ने फिल्म ‘कायरा’ छायांकनको लागि उनी सहित टीम फिलिपिन्स उडिसकेका छन् । तर अहिले यो टीममा साम्राज्ञि भने छैनन् । कारण उनी अर्को फिल्म ‘ईन्टु मिन्टु लन्डनमा’ छायांकनको लागि केही दिन अघि मात्र लन्डन प्रस्थान गरेकी छिन् ।
अब उनले आर्यनको ‘कायरा’ के गर्छिन् त ? यसको लागि उनले सेड्युल मिलाईसकेकी छिन् । लण्डनमा ‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ को आफ्नो छायांकन सकेर उनी कायराको लागि फिलिपिन्स उड्ने छिन् । फिल्मलाई लक्ष्मण रिजालले निर्देशन गर्दैछन् भने यसै फिल्मबाट साम्राज्ञिले १० लाख पारिश्रमिक लिएकी छिन् । फिलिपिन्समा कायराको लागि एक महिनाको छायांकन सेड्युल तय गरिएको छ भने आर्यन सहित टीमलाई बिदाई गर्न आर्यन पत्नी एयरपोर्ट पुगेकी थिइन् ।